पे’टमा पानी भरिएर सा’स फेर्नै कठिन, जीवन ब’चा’इदिन या’चना गर्दै ४ छोराछोरीकी आमा ! – Jagaran Nepal
पे’टमा पानी भरिएर सा’स फेर्नै कठिन, जीवन ब’चा’इदिन या’चना गर्दै ४ छोराछोरीकी आमा !
चाउथे, बेलचौतारामा डेरामा बस्दै आएका जिते नेपाली मनकारी घ’र’भे’टी नहुँदो हो त यतिबेला सडकमा पुगिसकेका हुन्थे । आर्थिक अभावमा बिरामी श्रीमतीको उपचार गर्न सकेका छैनन् । श्रीमतीको रेखदेखमा ख’टि’नुपर्दा मजदुरी काम गर्न बाहिर निस्कन समेत पाएका छैनन् ।
श्रीमतीको पे”ट फु’लि’ए’र श्वा’स नै रोकिने अवस्था भइसकेको छ । ४१ वर्षीया श्रीमती सरीताको क’ले’जो रो’गका कारण पे’ट फु’लि’एको छ । तत्काल पे’टको पानी फा’ल्नु’पर्ने डाक्टरले सुझाएका छन् । तर उनीसँग पैसा छैन । ३ वर्षअघिदेखि नै रोगले थलिएकी श्रीमतीलाई नेपालीले मजदुरी काम गरी पैसा जम्मा गर्दै उपचार गर्दै आएका थिए ।
तर अहिले मजदुरी काम समेत भनेजस्तो नभएको र श्रीमतीकै रेखदेख गर्नुपर्दा घर छाड्न नमिल्ने भएपछि खान समेत नपाउने अवस्था भएको छ । ३ छोरा र १ छोरी रहेका यी दम्पतीको कमाईको अरु श्रोत छैन । आमासहित ठूलो परिवार बाँ”च्न नै धौ”धौ भइरहेको अवस्थामा श्रीमतीको रो’गले गरिखाउँ न म’रि’जाउँ अवस्थामा पुगेको नेपाली बताउँछन् ।
घरभेटी दुर्गा नेपालले ५ महिनाअघि घरमा बसेदेखिको भाडा लिएकी छैनन् । उनैले वडामा सहयोग उठाउन सिफारिसदेखि अस्पतालसम्म जान भाडाको ब’न्दोब’स्ती गरेकी छन् । तर अस्पताल पुगेपछि के ले उपचार गर्ने ? एक पैसो छैन भन्दै श्रीमतीलाई कोठाबाट अस्पताल लैजान सकेका छैनन् ।
घरभेटी दुर्गाले भनिन् – ‘एकदमै गरिब परिवारका रहेछन् । हाम्रो घरमा आएपछि बिरामी नै हुनुहुन्छ । अहिलेसम्म भाडा पनि लिएका छैनौं । म पनि एकल महिला परेँ । आफूले सक्दो त गरेकै छु । नगद सहयोग गर्न सकिएन । त्यसैले मिडिया गु’हा’रे’की हुँ ।’
जिते नेपाली ४८ वर्षका भए । घर धादिङको ज्याम्रुङ हो । बुवाआमाको अभावमा हुर्किएका उनको नागरिकता पनि छैन । त्यही कारण श्रीमती सरीताको पनि नागरिकता बनेको छैन । उमेर पुगेका छोराछोरीको पनि नागरिकता नहुँदा जागिर छैन ।लक डाउनपछि मजदुरी काम गरेरै नेपालीले श्रीमतीको उपचार गरिरहेका थिए ।
अहिले पैसा नै नभएर कलेजोले काम नगर्दा पेटमा भरिएको पानी निकाल्न सकिएको छैन । नेपाली भन्छन् – ‘पे’ट फु’ले’र देखेर पीडाले छ’ट्प’टा’इरह’न्छिन् । तत्काल पे’टको पानी नफाले त्यसको असरले सा’स नै रोकिने अवस्था भइसक्यो ।पे’टको पा’नी झिकेमा १५ दिन जति आरामले बस्न सक्छिन् ।
यो अघि पनि ३ चोटी पानी झिक्दा उनलाई आराम भएको थियो । क’ले’जोको उपचारका लागि सहयोग गरिदिनुभए धर्म नै हुन्थ्यो ।’ सहयोग गर्न चाहने मनकारी व्यक्तिले 9846033286 मा सम्पर्क गरी सहयोग गर्न सक्नेछन् ।